ASUS MWC5| मा यसको ASUS ZenFone 2018 दायरासँग आश्चर्यचकित गर्दछ ग्याजेट समाचार
यस्तो देखिन्थ्यो कि एएसयूएसले बार्सिलोनामा सम्पन्न मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेसको ढाँचामा सबै आराम गर्न सबै पर्खिरहेको थियो जुन आफ्नो सम्पूर्ण शस्त्रागारलाई परिमार्जन गर्न र जनताले आफ्नो आस्तीन लुकाउने कुरा देखाउनको लागि देखाउँदै थियो। सावधान रहनुहोस्, किनकि हामी केवल तपाईंको नयाँको प्राविधिक सुविधाहरूको बारेमा कुरा गरिरहेका छैनौं ASUS जेनफोन ZNUMX, तर मूल्य पनि खरीद निर्णयमा एक महत्त्वपूर्ण तत्व हो र ASUS ले यसलाई ध्यानमा राख्यो।
मोबाइल प्लेटफार्मको लागि अर्को पुस्ता क्वालकॉम प्रोसेसरहरू; नकडाउन मूल्य र एक डिजाइन जसले कि कसैलाई तल झार्दैन। यो तपाईले लगभग ताइवानको स्मार्ट फोनको नयाँ दायरा वर्णन गर्न सक्नुहुनेछ; एक हंस फेला पार्छ कि गोल्डन अण्डा राखे जब उनले वर्षौं पहिले शुरू गरे जुन अब के रूप मा चिनिन्छ netbook। ASUS बर्ष को लागी व्यापार मा छ स्मार्टफोन, तर यस्तो लाग्छ कि यो नयाँ ASUS ZenFone5हाजिरमा हिट गर्न सक्दछ। हामीले उसको प्रस्तुतिमा के हेरेका छौं वर्णन गर्दछौं।
1 ASUS ZenFone5र ASUS ZenFone 5N, दायराको शीर्ष
2 ASUS ZenFone5लाइट, घरको सब भन्दा सानो
3 कृत्रिम बुद्धिमत्ताको साथ फोटो क्यामेरा
ASUS ZenFone5र ASUS ZenFone 5N, दायराको शीर्ष
त्यहाँ तीन नयाँ टर्मिनलहरू छन् जुन ASUS क्याटलगमा थपियो। र यो नयाँ दायराको दुई ठूला एक्सपेन्टरहरू हुन् ASUS ZenFone5र ZenFone 5Z। पहिलो चीज हामी तपाईंलाई यो कुरा दिन्छौं कि "5Z" भनिने मोडल सबै भन्दा सब भन्दा शक्तिशाली हो र जुन यसको मूल्यमा उत्तम हो: त्यो it 479eयूरोबाट सुरू हुन्छ।
साथै, सौन्दर्य रूपमा, दुबै मोडेलहरू एकै हुन्: सबै पर्दा (उनीहरूले कुल सतहको 90 ०% सम्म ओगट्छन्) र विकर्णको मजा लिन्छन्। पूर्ण HD + रिजोलुसनको साथ .6,2..XNUMX इन्च। अर्कोतर्फ, अर्को विशेषताहरू जुन तपाईं यस मोडेलमा प्रशंसा गर्न सक्नुहुनेछ स्क्रिनको माथिल्लो भागमा देख्नुपर्दछ। किन? ठिक छ, किनकि उनीहरूले अनुसरण गरेका छन् एप्पलले आफ्नो आईफोन X मा के व्यवस्था गरेको छ र ASUS ले यसको प्रतिलिपि बनायो। त्यो हो, तपाईंको नयाँ ASUS ZenFone5र ZenFone 5Z सँग "notch" छ जहाँ हामी फ्रन्ट क्यामेरा र बिभिन्न सेन्सरहरू फेला पार्दछौं।
होशियार हुनुहोस्, किनकि ASUS प्रस्तुतीकरणको समयमा लुकेको छैन र यसको उत्तम सम्पत्ति - कम्पनीको अनुसार - के यो टापु, भौं वा साधारण निशान हो यो एप्पल मोडेलले प्रयोग गरेको भन्दा सानो छ। त्योले भने, दुई संस्करण बीच दुई ठूला भिन्नताहरू हुन्: प्रोसेसर, र्याम र भण्डारण ठाउँ। ASUS ZenFone5सँग क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6366प्रोसेसर छ, RAM GB सम्मको र्याम चढ्ने सम्भावना र with 64 GB सम्मका फाइलहरू बचत गर्न ठाउँ।
यसको अंशको लागि, ASUS ZenFone 5Z सँग क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845। प्रोसेसर हुनेछ - यो प्लेटफर्ममा भर्खरको — जीबी सम्मको र्याम र २ storage8 जीबी सम्मको भण्डारण हुन सक्छ। लगभग केही पनि छैन। यस बीच, पछाडि हामीसँग १२ मेगापिक्सल रिजोलुसन डुअल क्यामेरा हुनेछ।
अन्तमा, दुबै टोलीहरूमा तपाईंसँग एक छ ,3.300,००० मिलिअम्प ब्याट्री क्षमता एक USB-C पोर्ट, २ × २ वाइफाइ, LTE / 2G जडान र Android को नयाँ संस्करण, Android .2.० Oreo।
ASUS ZenFone5लाइट, घरको सब भन्दा सानो
हामीसँग नयाँ दायरा खोल्न टर्मिनल पनि हुनेछ। र यो सम्मान सम्बन्धित छ ASUS ZenFone5लाइट। र जसरी तपाईलाई अन्य कम्पनीहरुबाट राम्रोसँग थाहा छ - विशेष गरी हुवावे - अन्तिम नाम "लाइट" ती संस्करणहरूको लागि अधिक विनम्र सुविधाहरू सहित हो। र यो सबै समयमा परिवर्तन हुँदैन।
ASUS ZenFone5लाइटमा-इन्च विकर्ण पूर्ण HD + स्क्रीन छ। यस बीच, हामीसँग प्रोसेसर हुनेछ Qualcomm Snapdragon 630 त्यो GB जीबी सम्मको र्याम मेमोरी र GB4जीबी सम्मको भण्डारण ठाउँको साथ हुन सक्छ।
यस बीच, यसको पछाडिको भागमा हामीसँग हुनेछौं एक डुअल सेन्सर क्यामेरा (१ 16 मेगापिक्सेल) र फ्रन्ट क्यामेरा यसको मालिकको सेल्फी लिन केन्द्रित। यस अवस्थामा हामीसँग एक सेन्सर हुनेछ जसले २० मेगापिक्सलको अधिकतम रिजोलुसन प्रस्ताव गर्दछ। यस टर्मिनलबाट हामी अरू के काम लिन सक्दछौं? जसमा एन्ड्रोइड .20.० संस्करण पनि स्थापना गरिएको छ; कि यो भर्खरको जेनरेशन G जी नेटवर्कसँग उपयुक्त छ र यसको ब्याट्रीको क्षमता 8.0०० मिलिम्पहरू छ।
कृत्रिम बुद्धिमत्ताको साथ फोटो क्यामेरा
यदि तिनीहरू केहि मा अन्य मोडेलहरुबाट आफूलाई अलग गर्न चाहान्छन भने, यो उच्च-मोडेलको फोटोग्राफिक भागमा छ। ASUS कृत्रिम बुद्धिमत्ताको साथ राम्रो फोटो परिणामहरू संयोजन गर्न चाहान्थ्यो। र यसको फाइदा लिन तीन कार्यहरू लागू गर्नुहोस्: एआई सीन डिटेक्शन, एआई फोटो लर्निंग र एआई बूस्ट। के तिनीहरू सबै प्राप्त गर्न चाहन्छन् उत्तम दृश्यको विस्तृत अध्ययन पछि उत्तम सम्भव क्याप्चर, तिनीहरूलाई पछि सम्पादन गर्ने र प्रत्येक अवस्था समायोजन गर्ने टर्मिनलको राम्रो प्रदर्शन प्राप्त गर्ने उत्तम तरिका।
अन्तमा, र सेक्टरमा अग्रणी ब्रान्डको अनुसरण पछि, ASUS एनिमोजिस पार्टी चुकिन चाहँदैन थियो र यस अवस्थामा सार्वजनिक उनको Zenmojis देखाएको छ। माथिको छविमा तपाईं यसमा एक नजर लिन सक्नुहुन्छ।
तीन मोडेलहरू मार्च र अप्रिल महिनाको बीचमा बजारमा हिट हुनेछन्। यद्यपि यस समयमा सहि मिति विस्तृत गरिएको छैन र हामी केवल ASUS ZenFone 5Z को शुरुवात मूल्य थाहा छ: 479 यूरो.
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » टेलिफोनी » मोबाईलहरू » ASUS MWC5मा यसको ASUS ZenFone 2018 दायरासँग आश्चर्यचकित गर्दछ
भेरो फेसनल सोशल नेटवर्क देखिन्छ र इन्स्टाग्रामलाई उखाल्न चाहान्छ